Ukuphupha ngokusila Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa usila, into ityunyuzwa ikakhulu. Ukuchaneka kwesiphumo kuxhomekeke, kwelinye icala, kwinto ngokwayo kunye nenqanaba lokusila, kwelinye icala, kwinani lokuphindaphinda.
Ukuba into icolwe kakuhle kakhulu, ibizwa ngokuba ngumgubo. Ukuba kwelinye icala iibits zisabonakala, oku kukwabizwa ngokuba sisiphumo esirhabaxa. Isiphumo esinjalo akufuneki sibe yimpazamo, ngokuchaseneyo, lo mgangatho uhlala ucwangciswa ngabom.
Izinto ezahlukeneyo zinokubakho emhlabeni kwinqanaba lokulala. Ke ngoko, xa utolika uphawu lwephupha, kukwabangela umdla omkhulu oko kwakusemhlabeni ngexesha lephupha. Kuba kule unokufumana izikhokelo ezibalulekileyo kumyalezo wephupha.
1 Uphawu lwephupha «gaya» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «gaya» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «gaya» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «gaya» - Ukutolikwa ngokubanzi
"Ukusila" umfanekiso wephupha ungasetyenziselwa uhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha njenge uphawu olonwabisayo Makuqwalaselwe. Izinto ezilindelweyo kunye nethemba ngekamva lakhe ziya kuzaliseka kwaye uya kuba nakho ukulandela ngempumelelo indlela yakhe ebomini.
Ukuba umntu ophuphayo ubona into yokusila kwento yokusila, oku kunokuthetha ukuba unethamsanqa el mundo yomlindo. Ukusila ecaleni kwentsimbi yomoya ephupheni, kwelinye icala, kungabonisa umzuzu wokungaqiniseki. Ukuba umntu ugaya ephupheni nge-grinder yekofu, kufuneka aqonde ukuba ukwisangqa sakhe. familia uziva ukhululekile kwaye wanelisekile.
Ukuguba okanye ukucudisa udaka, njengamagqabi e-mint okanye imbewu ye-mustard, ngelixa uleleyo kuhlala kungumqondiso. ingxaki. Oku kuya kuba nefuthe elibonakalayo kwizicwangciso ezenziwe kubomi bokuvuka, yiyo loo nto kunzima ukuziphumeza ezi projekthi. Ukuba uzibona ephupheni ngelixa ufafaza, kufuneka ulumke kwaye ulumke kwihlabathi lokwenyani.
Ngokubanzi, ukugaya iinkozo kunokumazisa ukwanda kwethamsanqa lomntu. Ukuba umntu ophuphayo usila ikofu ephupheni lakhe, ngekhe abe kwinkampani elungileyo. Unokufumana enye entle tyelela. Ukutyumza ipepile njengophawu lwephupha, kwelinye icala, kunokuzisa umzuzu olusizi nolusizi. Ukuba usila iiamangile ephupheni, oku kunokuqondwa njengophawu oluqinisekileyo lwekamva.
Uphawu lwephupha «gaya» - ukutolikwa kwengqondo
Uhlalutyo lwengqondo lwephupha lubona ekusileni kwephupha uphawu lwe Iqhubekekisa ukutya kokomoya. Ebomini bokuvuka, umphuphi wenza ulwazi lube lolwakhe, anokulusebenzisa ngokuzazi kwaye kulungelwe yena. Oku kuthathwa njengophuhliso oluqinisekileyo.
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, xa utolika uphawu lwephupha "gaya," kugxilwe ikakhulu kwinto eza kutyunyuzwa ephupheni.
Ukugaya izinongo kwindawo yokusila ngelixa uleleyo kunokuchaphazela enye Ukuxinezeleka khomba kwindawo yeemvakalelo. Ukuba usila ityuwa ephupheni, uhlala ufumana isibonakaliso samandla akho engqondo.
Isonka esiqhekezayo okanye iimuffins zinokubonakala ngathi liphupha uphuhliso oluhle yiza nabo kwihlabathi elivukayo. Ukuba amatye atyunyuziwe ngexesha lokulala, kuya kufaneleka ukukhathazeka ngemeko yomphefumlo wakho. Kuba unokuzifumana ungalingani apha. Ukusika okanye ukujija inyama eluhlaza ephupheni kuhlala kukhuthaza ukujongana neemfuno zakho kwindawo yesondo.
Ukuphambana nokusila umbona ephupheni lomntu kuhlala kubonisa ukungathandabuzeki ngobudoda. Ukuba iinkozo zijika zibe ngumgubo ephupheni, oku kunokuchaphazela umntu ngokwasengqondweni. ukuphumelela kwengqondo bonisa ukuphupha.
Uphawu lwephupha «gaya» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha elithi "gaya" luhlala lutolikwa njengophawu lokuqonda kobuthongo ukuba kukho umntu kuye. okwakhiwa iyaphila. Ngale nto, iyakwazi ukukhupha ulwazi olusebenzisekayo kulwazi olungasetyenziswanga ngaphambili.